Yiziphi iziketi, izingubo zokugqoka kanye namabhulukwe okugqoka ama-flip flops asemfashini - Imfashini 2022
Yiziphi iziketi, izingubo zokugqoka kanye namabhulukwe okugqoka ama-flip flops asemfashini
Ngezingubo eziya phansi
Akukho ukuvinjelwa kanye nama-taboos asele emfashini isikhathi eside. Uma kamuva nje, ogwini, ama-flip flops ayebhekwa njengefomu elibi futhi engenambitheki, manje angagqokwa ngisho nezingubo zakusihlwa namasudi ebhizinisi. Thola ukuthi kanjani!
Uma ugqoka ama-flip flops ajwayelekile enjoloba ngezikhindi kanye nesikibha, ukubukeka kwakho ngeke kube yimfashini futhi kube nesitayela. Kodwa uma usugqoke kahle, uphenduka isithonjana, njengalawa mantombazane esithombeni. Gqoka isiketi se-midi esinama-flounces amaningi, ama-pleats noma ukuphrinta okunemfashini futhi akekho ozobheka izicathulo zakho!
Inhlanganisela yengubo enhle yobude bezinzwane kanye ne-flip flops iyi-hit yangempela yehlobo lika-2019. Amantombazane amaningi agcizelela ngamabomu ukunethezeka kwengubo yakusihlwa ngezicathulo zasehlobo ezilula futhi ezikhululekile, ezithembele ekuhlukeni. Futhi kuyasebenza! Izindwangu zikanokusho ezinamaphrinti acwebezelayo nesibindi, ukusikeka okuyinkimbinkimbi nama-ruffles konke kudala umphumela oyifunayo.
Futhi uma ama-flip-flops ahlanganiswe kahle namabhulukwe, khona-ke ungakha ngisho nokubukeka okuhloniphekile, okulungele ikhodi yokugqoka yebhizinisi. Ama-flip flop erabha avamile asebenza kahle ngamabhulukwe amapayipi amnyama kanye nejazi elide lomsele noma i-cardigan, njengasesithombeni esingakwesokunxele, kuyilapho isihlilingi sawo sesikhumba esihle kakhulu sifanelana kahle namabhulukwe.
Ama-hacks angu-7 okukusiza ukuthi ukhule izinwele ezinde
Abesifazane abaningi baphupha ngokuba nezinwele ezinde, ngoba lokhu kungenye yezinkomba zobuhle besifazane. Sinamacebiso angakusiza ukukhulisa izinwele zakho ngokushesha ekhaya
Izingane ezijabule - umama ojabule: ama-hacks empilo ngamaholide omndeni